Kambodza: Famaritana Ny Fahamaotianana · Global Voices teny Malagasy
Kambodza: Famaritana Ny Fahamaotianana
Voadika ny 31 Desambra 2017 14:57 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aogositra 2006)
Taorian'ny tsy nahitàna azy nandritra ny folo taona, amin'ity taonarivo ity, miomana mba hamolavola ny fifaninanany voalohany mikasika ny Andriambavilanitry ny Hatsarana i Kambodza. Handray anjara amin'ny fifaninanana Miss Univers izay hatao ny taona ho avy ny mpandray anjara voatondro eo. Na izany aza, ao anatin'ny ezaka mba hikajiana ny kolontsaina Kambodziana, tahaka izay voalazan'ny minisitry ny Kolontsaina dia tsy azo atao ny manao fanamiana fitondra milomano, fara-faharatsiny ao anatin'ny fifaninanam-pirenena.
Tamin'ny taona 1993 sy ny taona 1995 no nikarakara ireo fifaninanana Oliravin'ny Hatsaràna ny firenena. Ary voasakana koa ny fanamiana manara-batana tamin'ireo fifaninanana teo aloha. Mpandàla fatratra ara-tsosialy ny nentim-paharazana, bodista avokoa ny ankabeazan'ny mponina ao amin'ny firenena.
Nanambara ny Minisitry ny Kolontsaina fa tsy mahazo miakatra eo ambony sehatra ireo mpifaninanana manao fanamiana fitondra milomano.
Tsy maintsy mitafy ara-dalàna ireo mpifaninana mandritra ny fotoana rehetra “mba hikajiana ny kolontsaina Kambodziana,” hoy Sim sarak, Talen'ny Ministeran'ny Kolontsaina ao Kambodza. Tsy hisy ampahany hanaovana matso ho an'ny fanamiana fitondra milomano mihitsy satria ny firenentsika tsy mbola tonga amin'izany sehatra izany.
Noho ny fahafantarana fa hampirehareha ireo vahoaka Kambodziana ny fisian'ny Miss Kambodza amin'ny fifaninanana ho avy, manoratra ny teratany Kambodziana iray hoe:
Ny fanomezana ho azy amin'ny fifaninanana dia handrakitra an-tsarintany ny firenenay manerana izao tontolo izao. Raha ho tafiditra amin'ny folo voalohany izy, dia ho afaka ampiasana ny toerana misy azy mba hanentanana izao tontolo izao momba ny toerana misy an'i Kambodza amin'izao fotoana izao, manasongadina ny filàna fiahiana ara-pahasalamàna tsara kokoa sy ny fanampiana tena ilaina fatratra ho an'ireo zaza mahantra ao amin'ny fireneny. Saingy na tafiditra na tsia ao amin'ny folo sangany indrindra izy, efa mpandresy iray sahady izahay.
Ho an'ny olona izay mandehandeha eran'izao tontolo izao, voajanahary ny fahamaotinana. Saingy, arakaraka ny fiarahamonina tsirairay avy, olana iray mbola hiadiana hevitra izany. Manoratra i Guy ao amin'ny SweetCucumber
Efa ho 60 taona izao no namoronana ny bikini. Fotoana tokony handehanana amin-javatra hafa ry zalahy a…
Sa sahala amin'i Garrison Keillor, amerikana iray mpanao hatsikana, nanambara fa: “Ny mijery ankizivavy manao bikini dia toy ny manana basy voafahana eo ambony latabatra. Tsy misy maharatsy an'izany, fa sarotra ny hieritreretana zavatra hafa.”
Nefa manantena ny Singaporiana iray fa:
Raha ny fahitana ny fahombiazan'i Kurara Chibana vao haingana tamin'ny fifaninanana Miss Universe tamin'ity taona ity, tokony hanana vitana hahavita tsara ny fifaninanana amin'ny taona ho avy ny Miss Kambodza!”
16 ora izayJapana